Gixy, Pandora, Pire, Porto iyo Rep: Yandex Meel Furan - Qaybta 2 | Laga soo bilaabo Linux
Gixy, Pandora, Pire, Porto iyo Rep: Yandex Furan Source - Qaybta 2
Iyada oo tan qaybta labaad laga soo bilaabo taxanaha maqaalada "Source Yandex Furan" Waxaan sii wadi doonnaa sahaminta aan ku hayno buugga codsiyada furan soo saaray Giant teknoolojiyad de "Yandex LLC".
Si loo sii wado balaadhinta aqoonteena ku saabsan codsiyada furan ee uu sii daayay mid kasta oo ka mid ah Ragga Tiknoolajiyadda ee kooxda loo yaqaan GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon iyo Microsoft) iyo kuwa kale sida: "Alibaba, Baidu, Huawei, Netflix, Samsung, Tencent, Xiaomi, Yahoo iyo Yandex".
Iyo in qaybta koowaad taxanahan oo ku saabsan "Source Yandex Furan":
YxOS-P1: Baadhitaanka isha weyn ee 'Yandex Open Open' - Qaybta 1aad
1 YxOS-P2: Yandex Furan Isha - Qeybta 2
1.1 Yandex Open Source codsiyada
1.1.5 Qalabka Tijaabinta La Soo Saarayo (REP)
YxOS-P2: Yandex Furan Isha - Qeybta 2
Codsiyada Yandex Furan Source
Kahor intaadan bilaabin, waxaa xusid mudan marka laga reebo, bogga rasmiga ah ee Isha furan ee Yandex (YxOS), waxaad sidoo kale ka heli kartaa mashaariic kale oo badan oo furan oo ay shirkaddu sheegtay 2-da bog ee rasmiga ah GitHub (Yandex y YandexMobile) iyo websaydhada Isha Furan Cajiib, Ajandaha Isha Furan y Furan Source Libs.
Laga soo bilaabo liistada mashaariicda ku xusan "Source Yandex Furan" Waxaan ku bilaabi doonnaa barnaamijyada soo socda ee adiga GitHub goobta ugu weyn:
Si kooban, kanaga bogga rasmiga ah ee GitHub, qeexayaa soo socda oo ku saabsan:
“Gixy waa aalad lagu falanqeeyo qaabeynta Nginx. Hadafka ugu weyn ee Gixy ayaa ah in laga hortago qaladka qaldan ee amniga iyo qalabeynta qaladaadka. Xilligan la joogo noocyada Python-ka la taageeraa waa 2.7, 3.5, 3.6 iyo 3.7. Ogow, Gixy waxaa si fiican loogu tijaabiyay oo kaliya GNU / Linux, Nidaamyada kale ee Howlgalka waxay soo bandhigi karaan dhibaatooyinka qaar. "
Intaa waxaa dheer, ka mid ah muuqaalada ugu muhiimsan awoodda lagu ogaan karo sheekooyinka soo socda ayaa lagu xusay:
[ssrf] Codsi ku saabsan Server-side been abuur ah.
[http_splitting] HTTP kala jaban
Arimaha leh asalka tixraaca / ansaxinta asalka.
[add_header_redefinition] Qeexitaanka cinwaanada jawaabta adoo adeegsanaya dardaaranka "add_header".
[host_spoofing] Been abuur ah Madaxa martida ee codsiga.
[ansax_referers] midkoodna ma jiro saxeexyaal sax ah.
[add_header_multiline] madax jawaab celinta Multiline.
[alias_traversal] Jidka marinka marinka marinka qaab khaldan oo qaabaysan.
Dad badan macluumaad dheeraad ah ku saabsan Gixi waxaa laga heli karaa soo socda isku xirka.
“Pandora waa koronto-dhaliye wax-qabad sare ku shaqeeya oo ku baxa luqadda Go. Waxay ku taageertay HTTP (S) iyo HTTP / 2 waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku qorto dhacdooyinkaaga culeyskaaga Go, si markaa loo soo ururiyo wax yar uun ka hor intaan la tijaabin.
Dad badan macluumaad dheeraad ah ku saabsan Pandora waxaa laga heli karaa soo socda isku xirka.
“Waa maktabad laga dheehan karo muujinta joogtada ah ee Perl Incompatible Revidence. Maktabaddani waxay ujeedadeedu tahay inay hubiso qaddar badan oo qoraal ah oo ka dhan ah tibaaxaha caadiga ah ee aadka u yar. Guud ahaan, waxaad hubin kartaa oo keliya haddii qoraalka la siiyay u ekaado muujinta caadiga ah, laakiin si dhakhso leh ayaad u sameyn kartaa (in ka badan 400MB / s qalabkayagu waa caadi). Waxaa intaa dheer, regexps badan ayaa la isku dari karaa, taas oo siinaysa awood ay ku hubiso qoraalka ka dhanka ah ku dhowaad 10 regexps hal marin (iyo sii wadida xawaare isku mid ah).
Dad badan macluumaad dheeraad ah ku saabsan boodada waxaa laga heli karaa soo socda isku xirka.
“Porto waa nidaam kale oo maareynta konteenarrada Linux, oo ay soo saartay Yandex. Hadafka ugu weyni waa in la bixiyo hal meel oo laga soo galo nidaamyo kala duwan oo Linux ah sida cgroups, magacyada, mounts, shabakadaha, iwm. Porto waxay higsaneysaa inay saldhig u noqoto mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha. "
Intaa waxaa dheer, ka mid ah muuqaalada ugu muhiimsan kuwa soo socda ayaa lagu sheegay:
Caawinta konteynarrada buulka
Taageeridda ku-noolaanshaha buulka.
Adeeg lagu kalsoonaan karo.
Dad badan macluumaad dheeraad ah ku saabsan Porto waxaa laga heli karaa soo socda isku xirka.
Qalabka Tijaabinta La Soo Saarayo (REP)
“Waa deegaan ipython-ku saleysan oo loogu talagalay in lagu sameeyo cilmi baaris ku saleysan xog si isdaba-joog ah oo la tarmi karo Ama ereyo kale oo ka fudud: Waa sanduuqa aaladda barashada mashiinka ee aadanaha. "
Waxaa ku jira baakad mideysan oo loo yaqaan 'Python wrapper' oo loogu talagalay maktabadaha kala duwan ee ML.
Kuu ogolaanayaa tababbarka isbarbar dhiga kala saarista kooxaha.
Waxay bixisaa warbixinno kala-soocid / dib-u-celin leh garaafyo.
Waxay leedahay taageero naqshadeynta is-dhexgal.
Waxaa ka mid ah algorithms-ka raadinta shabakadaha casriga ah ee fulinaya is barbar socda.
Waxay leedahay nooc baaritaanka iyada oo loo marayo git.
Waxay bixisaa jaangooyooyin tayo leh oo lagu rakibay oo lagu qiimeeyo.
Waxay leedahay naqshad meta-algorithm ah (Rep-lego).
Dad badan macluumaad dheeraad ah ku saabsan Rep waxaa laga heli karaa soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" sahamintan labaad ee «Yandex Open Source», waxay bixisaa barnaamijyo xiiso leh oo kaladuwan oo barnaamijyo furan ah oo ay soo saartay Giant Teknolojiyada ee «Yandex LLC».
Sidoo kale, ka dhig mid waxtar u leh dhammaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo gacan weyn ka geysatey hagaajinta, koritaanka iyo baahinta nidaamka deegaanka ee codsiyada la heli karo «GNU/Linux». Ha joojin inaad dadka kale la wadaagto, websaydhka aad jeceshahay, kanaalka, kooxaha ama bulshooyinka shabakadaha bulshada ama nidaamyada farriimaha. Ugu dambeyntiina, booqo boggayaga bogga at «Laga soo bilaabo Linux» si aad u sahamiso warar dheeraad ah, uguna biirto kanaalkayaga rasmiga ah ee Telegram ka FromLinux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Gixy, Pandora, Pire, Porto iyo Rep: Yandex Furan Source - Qaybta 2
FSF waxay leedahay "wax aan la aqbali karin oo aan cadaalad ahayn" waxayna maalgelin doontaa maqaallo ku saabsan arrimaha sharciga iyo arrimaha